🥇 ▷ Cuntada cusub ee loo yaqaan 'U1 chip' ee Apple oo cidina ka hadlin munaasabadda ✅
Cuntada cusub ee loo yaqaan ‘U1 chip’ ee Apple oo cidina ka hadlin munaasabadda
Galabnimadii Talaadada ayay Apple soo bandhigtay alaabada iyo adeegyadeeda cusub. Sidii la filaayay, diiradda ayaa lagu saaray iPhones-ka cusub. Markaa, shirkaddu waxay soo bandhigtay iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Dhacdadu waxay ahayd tii ugu dareereysay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo horumar badan oo cusub laga sameeyay qaybta. Apple Watch iyo adeegyada sida Apple TV + iyo Apple Arcadian. Si kastaba ha noqotee, inbadan baa hadhay in la ogaado.
In kasta oo ay jirtay hadal kahadal ah aaladda iPhone 11-ka cusub, ma jirin wax hadal ah oo ku saabsan processor-ka U1. Muxuu noqon doonaa jabkan cusub?
IPad 11 oo leh kumbuyuutarrada U1 ee loogu talagalay adeegga Apple Tracker?
Isbedelada ku jira iPhoneka cusub waxaa kamid ah processor-ka cusub ee U1. Chip Tani waxay ugu dambeyntii u keeni kartaa dadweynaha raadinta muddada dheer ee Apple (Apple Tracker?). Xanta ayaa farta ku fiiqaya soo bandhigida “Tile tracker” oo aan la muujin intii lagu jiray furaha. Dareenkaas, Apple wuxuu ku shaqeynayaa soosaarid lagu dhisay aaladahaaga.
Waqtigan xaadirka ah, sida ay sheegayaan macluumaadka la hayo, iPhone 11 wuxuu horay u haystaa aaladda. Markaa, shirkadda Cupertino ayaa laga yaabaa inay isu diyaariso, iyada oo ay weheliso qalabka cusub ee iOS 13, oo ah adeeg joogto ah oo lagula soconayo aaladda.
Tile ayaa laga yaabaa inuu siiyay hal ku dhigga sida loo isticmaalo Apple Tracker?
Sida Tile (iyo aaladaha kale ee la midka ah), waxaa suurtagal ah in la helo meel lumay iyadoon la helin GPS ama kaarka macluumaadka. Asal ahaan nidaamku wuxuu isticmaalaa chip kaasoo adeegsada isku xirka Bluetooth-ka si uu ula wadaago goobta. Marka xigta, goobta waxaa lagu wadaagaa dhammaan aaladaha la midka ah (iyada oo aan lagaranayn adeegga taageeraya muujinta).
Sidaa darteed, ujeedka Apple Marka lagu daro kumbuyuutarka U1 ee iPhone 11, 11 Pro iyo 11 Pro Max, waxaad yeelan kartaa goobo qalab waqti kasta iyo xaalad kasta. Tusaha noocan ahi ma isticmaalo awood badan. Waad xitaa sameyn kartaa, adoo tixgelinaya Tile, waxaad la shaqeyn kartaa batteriga haray ee iPhone marka ay damto.
Ka sokow suurtagalnimada noocan ah, processor-kaan cusub wuxuu ka faa’iideysanayaa tikniyoolajiyadda ” ultraband ” kaasoo u oggolaan doona meel aad u sax ah marka la raadinayo qalab kale oo isna leh U1. Xaaladdan gaarka ah oo durba aan lahayn “buundooyin dhexda ah”, waxaad isticmaali doontaa “juqraafi ahaan cabbirka qolka fadhiga”.
MoreD wanaagsan oo AirDrop ah
Marka lagu daro shaqada goobta, teknolojiyadani waxay sidoo kale beddeli doontaa habka tikniyoolajiyadda AirDrop loo adeegsado macruufka 13.
Kuwa haysta iPhones cusub, waxay wadaagi karaan feylasha si fudud iyagoo tilmaamaya iPhone kale! Muuqaalkaani, si kastaba ha noqotee, waxaa laga heli karaa oo keliya nooca iOS 13.1 soo socda Sebtember 30-deeda.
Marka la soo koobo, waxaa weli jira “ifs” badan oo la soo bandhigi doono. Si kastaba ha noqotee, adeegyo aad iyo aad ufiican ayaa had iyo jeer lagu soo dhaweyn doonaa inay kaa caawiyaan inaad soo celiso qalab qaali ah.